Uthando Nomshado - The Agency Version | Martech Zone
ULwesibili, April 8, 2014 NgoLwesine, Juni 18, 2015 Douglas Karr
Inhlangano yethu, DK New Media, ubeseneminyaka engaphezu kwengu-5 manje futhi esanda kumemezela ushintsho lwendlela. Ngonyaka odlule, sabakhathaza kakhulu abasebenzi bethu sabe sesithatha amaklayenti amaningi anzima acishe aholela ekufeni kwethu.
Sakhe ubudlelwano obumangalisayo namakhasimende amangalisayo - iningi lawo ebelinathi iminyaka eminingana. Siyabathanda futhi sethemba ukuthi bayasithanda - akuyona nje imali ekhokhelwayo, kuyisifiso sethu. Akukho okusenza sijabule njengokubona amaklayenti ethu ephumelela, futhi akukho okukhungathekisa njengalapho ubuhlobo buhamba kabi.
Ngichitha isikhathi esiningi manje ngisebenza ngamathemba okuqinisekisa ukuthi sobabili sizibophezele kokukhulu Umshado futhi bobabili bafuna ubudlelwano bothando. Ngifuna ukugwema ukungena ebudlelwaneni obunenkinga ngazo zonke izindlela - kungakhathalekile ukuthi ungakanani umshado. Ubudlelwano obubi abuhlukumezi nje iklayenti elibandakanyekayo - bungaba nomthelela omubi kuwo wonke amaklayenti akho njengoba isikhathi sakho namandla kuphelile uzama ukuhlenga ukuzibandakanya okunenkinga. Uma singakwazi ukubona ezinye izici zamakhasimende ezikhathazayo kwinqubo yokuthengisa, kungasisindisa sonke ebunzimeni obukhulu phansi komgwaqo.
Besifuna ukuzijabulisa futhi sibeke ukukhanya kulezi zikhathi ezimnyama… ngakho-ke le-infographic ibala ezinye izibonelo zezinhlobo zobudlelwano, ngeshwa, okwadingeka siziqhelelanise nazo! Kwethulwa Ezothando Nezomshado - The Agency Version.
Tags: agencyiklayentiuthando nomshadoUmshadoubuhlobo
Ngo-Apr 8, i-2014 ku-11: 33 AM
Ngempela! Kade ngiyilindile leyo! Ngiyajabula ukukubona ekugcineni kuphumela obala emphakathini! Okukhazimulayo!
Ngo-Apr 8, i-2014 ku-10: i-16 PM
Ngicabanga ukuthi ngibe nabambalwa balaba bomshado, ngabe likhona iqembu lokwelapha eliseduze?
Ngo-Apr 8, i-2014 ku-10: i-50 PM
Bengicabanga ukuthi yilokho esikwenza masonto onke!
Ngo-Apr 11, i-2014 ku-12: i-12 PM
ngokudabukisayo kuyiqiniso! Wenze kahle, manje udinga nje ukwakha imibuzo engathathwa ngamakhasimende ukuze ayihlunge ngobunyoninco!
Ngo-Apr 20, i-2014 ku-12: i-59 PM
UTHANDO NOMSHADO (The Agency Version) - Kuhle! 🙂